Dawlada Somaliya Oo Qorshaynaysa Inay Nin Ajnabi ah U Magacawdo Gudoomiyaha Bankiga Dhexe Ee Dalka. | Awdalmedia.com
Dawlada Somaliya Oo Qorshaynaysa Inay Nin Ajnabi ah U Magacawdo Gudoomiyaha Bankiga Dhexe Ee Dalka.
Dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay nin ajnabi ah oo lagu magacaabo Nigel Roberts usoo magacaabidoono guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
Arrintaan ayaa soo shaac baxday ka dib markii bishan Jan. 4teedii golaha wasiirada ay meel-mariyeen sharciga ogolaanaya in qof ajinabi ah uu madax ka noqdo Bangiga Dhexe.
Wasiirka Maaliyadda ee dowladda Federalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa bishii August ee 2018 ku dhawaaqay in jagada bangiga dhexe ay bannantahay ayna soo codsan karaan cid waliba. Waxaana xayeesiiska shaqada lagu baahiyey joornaalka Economist ee ka soo baxa dalka Britain ay ku bixsay dowladda qarash gaaraya $26,000 oo dollar.
Sidoo kale dawlada ayaa la sheegay inay ka hortimid caqabadda xeerka Bankiga Dhexe, oo dhigaya in shuruudda koowaad ee laga doonayo qofka xilka guddoomiyaha bankiga dhexe qabanaya uu yahay muwaadin Soomaaliyeed, taasoo sababtay in dowladda ay bilowdo olole la rabo in wax lagaga beddelo sharcigaas, islmarkaasina la horgayn doono baarlamanka Soomaaliya si wax looga beddelayo xeerka Bankiga Dhexe.
Wararka ayaa sheegaya in xilkan loo magacaabi doono nin lagu magacaabo Nigel Roberts oo u dhashay dalka Britain muddo badanna kasoo shaqeeyey Bankiga Adduunka, waxay arintan noqon doontaa markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya oo qof ajnabi ah uu xilka qabto.
Maxamed Dalmar Cabdiraxmaan oo ahaa agaasimihii ugu dambeeyey ee Bangiga dhexe ee Soomaaliya dowladdii Maxamed Siyaad Barre, aqoon wanaagsan u leh qaabka uu shaqeeyo Bangiga Dhexe. “Waxaa jira boqolaal Soomaali ah oo intii la doono ka aqoon iyo khibrad badan Mr. Nigel, haystana shahaadooyin kala duwan Master iyo PhD kana soo shaqeeyey bangiyada caalamiga. Soomaaliya markay xornimada qaadatay 1960, waxaa bangiga dhexe maamulayey laba nin oo Talyaani ah maxaa yeelay dad aqoontaas leh ma jirin. Laakin maanta oo Soomaali adduunka ku wada yaacday, waxaa la helayaa dad si fiican uga soo bixi-kara shaqadaas. Ma aqaan wax dowladda maanta ku kalifay in qof ajinabi ah lagu magacaabo Bangiga Dhexe ee Soomaaliya. Jagada ajinabi ku haboon ayaa waxay ila tahay jagada agaasimaha guud ee bangiga dhexe ” ayuu yiri Maxamed Dalmar.
1- Mushaarka Nigel Roberts oo aad u badnaandoona, maadaama uu yahay ajinabi xiriir hoosana la leh ha'yadda Bangiga Adduunka ee World Bank oo si weyn u kabta mushaaraadka shaqaalaha dowladda Soomaaliya
Baarlamaanka Federaalka ayaa beri u ballansan in ay ka doodaan ansixinta sharciga u degsan Bangiga Dhexe ee Soomaaliya si markaas shaqada guddoomiyenimada loogu magacaabo Mr. Nigel Roberts.